झापामा ९ र सुन-सरीमा २ जना कोरोना संक्र`मित थपिए ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/झापामा ९ र सुन-सरीमा २ जना कोरोना संक्र`मित थपिए !
यो सँगै कोरोना संक्र`मितको सं`ख्या ३ सय ९० पुग्यो !
मंगलबार प्रदेश-१ मा थप ११ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्र`मण देखिएको छ। संक्र`मितहरू मध्ये झापाको कचन कवल गाउँ पालिकाका ९ जना र सुन`सरीका दुई जना छन्। सुन`सरीमा देखिएका दुई जना मध्ये एक जना सश`स्त्र प्रहरी रहेको खुलेको छ।
वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रति`ष्ठान धरान र कोशी अस्पताल विराटनगरमा परीक्षण गर्दा ११ जनालाई कोरोना संक्र`मण देखिएको हो । झापामा थपिएका संक्र`मितहरू भारतबाट आएका हुन्। यो सँगै कोरोना संक्र`मितको संख्या ३ सय ९० पुगेको छ।
त्यस्तै मुलुकमा कोरोना भाइरस देखापरेको करिब चार महिना पछि कर्णाली प्रदेशमा सोमबार पहिलोपटक सङ्क्र`मण पु`ष्टि भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देश`नालयका अनुसार दैलेखको आठ बीस नगर`पालिका–१ सात्तलाका ३५ वर्षीय पु`रुषमा कोरोना पो`जिटिभ पाइएको हो ।
एक साताअघि भारतबाट आएका उनको स्वाबको नमूना सोमबार सुर्खेतमा परी`क्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो । पुनः परी`क्षणका लागि भेरी अस्पताल नेपालग`ञ्जको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । त्यहाँ पनि रिर्पोट पो`जिटिभ देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रा`लयले कोरोना सङ्क्र`मण पुष्टि गरेको हो । सङ्क्र`मित व्यक्ति अहिले नगरपा`लिका स्थित क्वारेन्टाइनमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।